डाउनलोड गर्नुहोस् WinRAR को लागी Windows
सित्तैमा डाउनलोड गर्नुहोस् को लागी Windows (3.07 MB)
डाउनलोड गर्नुहोस् WinRAR,
आज, Winrar फाइल कम्प्रेसन कार्यक्रमहरु को बीच सबै भन्दा राम्रो सुविधाहरु संग सबै भन्दा व्यापक कार्यक्रम हो। कार्यक्रम, जो धेरै फाइल ढाँचाहरु लाई समर्थन गर्दछ, यसको सजिलो स्थापना र उपयोग संग ध्यान आकर्षित गर्दछ। Winrar को विन्डोज संस्करण, जो पुरा तरिकाले जिप र आरएआर ढाँचा को समर्थन गर्दछ र संग्रह को लागी पूर्ण समर्थन प्रदान गर्दछ, एक विश्व प्रसिद्ध अनुप्रयोग हो ताकि फाइलहरु डिजिटल वातावरण मा बिखरेका छैनन् र धेरै ठाउँ लिदैनन्।
Winrar के हो?
Winrar, जो एक फाइल सression्कुचन कार्यक्रम को रूप मा प्रयोग गरीन्छ, एक सफ्टवेयर हो कि कागजात डिजिटल मिडिया मा भण्डारण गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ। यूजीन Roshal सफ्टवेयर को पहिलो विकासकर्ता हो। अलेक्जेन्डर Roshal पछि सफ्टवेयर को विकास को लागी Roshal टीम मा शामिल गरीएको थियो। टर्की सहित असंख्य भाषाहरूमा प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रस्ताव गरिएको सफ्टवेयर फाईल साइज घटाएर फाइल संकुचन गरेर अभिलेख राख्ने प्रभावकारी उपकरण हो।
आज, इन्टरनेट बाट डाउनलोड धेरै फाइलहरु संकुचित फाइलहरु को रूप मा देखा पर्दछ। आदेश मा प्रयोग गर्न वा यी फाइलहरु खोल्न को लागी, फाइल कम्प्रेशन प्रोग्राम Winrar कम्प्यूटर मा स्थापित हुनु पर्छ। Winrar, जो एक कार्यक्रम कम्प्रेस र अवस्थित फाइलहरु को भण्डारण को लागी आवश्यक छ, साथै खोल्न र इन्टरनेट बाट डाउनलोड संकुचित फाइलहरु को उपयोग गर्न को लागी, धेरै फाइदाहरु संग प्रयोगकर्ता को काम को सुविधा।
Winrar के गर्छ?
के WinRar, दसौं अपरेटिंग प्रणालीहरू द्वारा समर्थित RAR ढाँचा प्रयोग गर्न बनाइएको एक कार्यक्रम, निम्नको आवश्यकता छ:
सुरक्षा: कम्प्युटरमा फाईलहरूको सुरक्षा सधैं नै एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा भएको छ। कम्प्रेसिंग र संग्रह फाइल सधैं सुरक्षा को मामला मा प्रयोगकर्ता को लागी एक लाभ हो। जब फाइलहरु एक निश्चित पासवर्ड संग संकुचित हुन्छन्, उनीहरु धेरै फाइलहरु को तुलना मा एक भाइरस को खतरा को बिरुद्ध सुरक्षित छन्। संकुचित र ईन्क्रिप्टेड फाइलहरु धेरै फाइलहरु को तुलना मा एक भाइरस द्वारा deconstruct गर्न को लागी धेरै गाह्रो छ।
फाइल लेआउट: कम्प्युटर वातावरणमा दर्जनौं फाइलहरु कम्प्रेसि and र अभिलेखमा राखेर एक वा धेरै फाइलहरु फाइल लेआउट मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। एक भीड र आँखा को लागी डेस्कटप एक कार्य वातावरण हो कि नकारात्मक कार्य दक्षता लाई प्रभावित गर्दछ। कम्प्रेसिंग र एक संगठित तरीका मा फाइलहरु भण्डारण प्रयोगकर्ता को लागी एक महान सुविधा हो।
अन्तरिक्ष बचत: Winrar संग, यो आवश्यक फाइलहरु को उपयोग गर्न को लागी सजिलो हुन्छ, र हार्ड ड्राइव मा फाइलहरु द्वारा कब्जा गरीएको ठाउँ पनि कम हुन्छ। ठाउँ र कोटा बचत संग, कम्प्यूटर धेरै कुशलतापूर्वक प्रयोग गरीन्छ। फाइलहरूलाई विनारसँग 80०% ले घटाएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो ठाउँको बचत कति बढि छ भनेर राम्ररी बुझ्न सकिन्छ।
एकल फाइल को लाभ: एक फाइल को रूप मा अवस्थित फाइलहरु को रखरखाव को अलावा, Winrar इन्टरनेट बाट डाउनलोड फाइलहरु लाई एक एक गरेर एक फाइल को रूप मा डाउनलोड गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ, र यो डाउनलोड फाइलहरु को एक फोल्डर खोज्न को कठिनाई लाई हटाउँछ -एक द्वारा।
फाईल ट्रान्सफर: इ-मेल मार्फत एक-एक गरेर फाईलहरू स्थानान्तरण श्रम र समयको हिसाबले धेरै समस्याग्रस्त छ। जे होस्, एक फाइल को रूप मा, स्थानान्तरण छिटो छ, र इन्टरनेट मा फाइलहरु अपलोड गर्न सजिलो हुन्छ। समय को बिरुद्ध आज को दौड मा, एक एकल क्लिक संग अन्य पार्टी को लागी धेरै फाइलहरु को प्रसारण समय बचाउँछ र यो पनी सुनिश्चित गर्दछ कि एक एकल फाइल मा भण्डारण गरिएका कागजातहरु एक स्किपिंग बिना संगठित तरीका मा अन्य पार्टी लाई पठाइन्छ।
स्कोप बाहिर फाइदा: Winrar, जो प्रयोग गर्न धेरै नै सजिलो छिटो, फंक्शनल र अपरेटि। सिस्टम मैत्री सफ्टवेयर हो, एक प्रोग्राम हो जुन यसको दायरा बाहिर काम गर्दछ। उदाहरण को लागी, यसले कन्सोल कमाण्डहरु संग प्रोग्राम डेवलपर्स लाई मद्दत गर्दछ। मानौं कि एक २० एमबी अपडेट फाइल ५ एमबी संकुचित छ। जब प्रयोगकर्ता कुनै पनी अपडेट गर्न चाहन्छ, ऊ १५ एमबी को एक फायदा हुनेछ।
Winrar सुविधाहरु के हुन्?
Winrar, एक छिटो र सुरक्षित फाइल सression्कुचन कार्यक्रम, अन्य सression्कुचन कार्यक्रमहरु को तुलना मा यसको धेरै प्राविधिक सुविधाहरु संग ध्यान आकर्षित गर्दछ। अर्थात्:
टर्की भाषा सुविधा भएको, Winrar पूर्ण RAR र ZIP २.० संग्रह समर्थन छ।
32 बिट र 64 बिट ध्वनि, संगीत र ग्राफिक फाइलहरु मा इंटेल आवेदन छिटो र व्यावहारिक उन्नत र छिटो सम्पीडन एल्गोरिथ्म को लागी धन्यवाद को लागी बनाईएको हो।
फाइल सression्कुचन छिटो र फाइल को ड्र्याग र ड्रप संग सजिलो छ।
यो कम्प्रेसिंग र धेरै फाइलहरु १०% -50% वैकल्पिक कम्प्रेसन कार्यक्रमहरु को तुलना मा फाइल को सुविधा छ।
यो फाइलहरु कि शारीरिक रूप बाट क्षतिग्रस्त र 10% -50% अन्य कम्प्रेसन कार्यक्रमहरु को तुलना मा अधिक दक्षता संग बरामद गर्न को लागी वांछित छन् रिकभरी।
Filenames यूनिवर्सल कोड (युनिकोड) समर्थन छ।
Ukb फाइलहरु, संग्रह विवरण, 128 बिट ईन्क्रिप्शन र त्रुटि लग धेरै थिम र इन्टरफेस समर्थन संग बदल्न सकिन्छ।
RAR र ZIP बाहेक, यो पढ्न र ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z र Z स्वरूपहरु डिकोड गर्न सक्नुहुन्छ।
यो एक नि: शुल्क कार्यक्रम हो कि टर्की भाषा समर्थन गर्दछ।
Winrar कसरी प्रयोग गर्ने?
यदि तपाइँ विनरसँग संकुचित र सुरक्षित फाईलहरू संग्रह गर्न चाहानुहुन्छ भने, पहिलो चरण भनेको डाउनलोड विनरर भन्दै तपाइँको कम्प्युटरमा प्रोग्राम डाउनलोड गर्नु हो। Winrar संग तपाइँ RAR र ZIP को रूप मा2ढाँचा मा फाइलहरु कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। Winrar को उपयोग अत्यन्तै सजिलो र व्यावहारिक छ। अब विन्नर विन्डोजको चरण-देखि-चरणको उपयोगको व्याख्या गरेर मुद्दालाई स्पष्ट पार्नुहोस्।
तपाइँ एक फोल्डर मा कम्प्रेस गर्न चाहानुहुन्छ फाइलहरु स collecting्कलन गरेर शुरू गर्नुहोस्। अन्य शब्दहरुमा, कम्प्यूटर भाषा मा, संकुचित गर्न को लागी फाइलहरु एउटै यूआरएल मा हुनु पर्छ। डेस्कटप मा यो फोल्डर राख्नु आफ्नो काम सजिलो बनाउँछ।
तपाइँ कम्प्रेस गर्न चाहानुहुन्छ फाइल मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाइँ4विकल्प देख्नुहुनेछ, पहिलो स्थानमा संग्रहमा थप्नुहोस् को साथ। संग्रहमा थप्नुहोस् क्लिक गरेर जारी राख्नुहोस्। तपाइँ फाइल स्थान तपाइँ यहाँ बाट संकुचित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ धेरै धेरै विकल्पहरु को जाँच गरेर छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। Winrar को उपयोग को विस्तार गरौं, Winrar इन्टरफेस को सामान्य खण्ड बाट शुरू।
Winrar मा सामान्य ट्याब
Winrar इन्टरफेस को सामान्य ट्याब मा, त्यहाँ7विकल्पहरु छन् कि फाइल सression्कुचन, गुणस्तर र उपयोग लाई प्रभावित गर्दछ।
स Arch्ग्रह ढाँचा
स Comp्कुचन विधि
भोल्युम द्वारा विभाजित गर्नुहोस्
मोड अपडेट गर्नुहोस्
प्रत्येक विकल्प मा बनाईएको चयन अनुसार, संकुचित फाइल धेरै व्यावहारिक र प्रयोगकर्ता को लागी छिटो हुन्छ।
1 - संग्रह नाम
संग्रह नाम खण्ड फाइल सुरक्षित छ जहाँ खण्ड हो। यदि तपाइँ छनौट गर्नुहुन्न जहाँ फाइल बचत गर्न को लागी, तपाइँको फाइल यस सेक्सन मा सुरक्षित गरिनेछ। जब तपाइँ बचत स्थान परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ ब्राउज बटन क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र सेक्सन तपाइँ फाइल कम्प्रेस गर्न चाहानुहुन्छ। पहिले संकुचित फाइलहरु को स्थान पनि ड्रप डाउन बक्स संग छिटो चयन गर्न सकिन्छ।
2 - प्रोफाइल
यो एक विकल्प हो कि Winrar प्रयोगकर्ताहरु को लागी समय बचाउँछ र फाइलहरु लाई भागहरु मा विभाजित गरेर वांछित आकारहरु लाई संकुचित गर्दछ। तपाइँ भागहरु मा एक 5GB फाइल विभाजित गर्न सक्नुहुन्छ र 1GB फ्लैश मेमोरी संग एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा सार्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ के को लागी यो गर्न को लागी प्रोफाईल सेक्सन मा १ जीबी प्रोफाइल बनाउन को लागी छ र यो कम्प्रेसन विधि छनौट गरेर बचत गर्न को लागी हो।
प्रोफाईल विकल्प, जो फोरम मालिकहरु धेरै प्रयोग, यो सजिलो क्लाउड फाइल भण्डारण सेवाहरु को लागी १०० एमबी टुक्राहरु अपलोड गर्न को लागी बनाउँछ।
3 - संग्रह ढाँचा
यो खण्ड जहाँ फाइल ढाँचा संकुचित गर्न को लागी चयन गरीएको छ। RAR कार्यक्रम र जिप कार्यक्रम को समर्थन, Winrar RAR संग जिप र सामान्य फाइलहरु संग वर्ड एक्सेल कागजात संग्रह गर्न सक्षम बनाउँछ।
4 - सression्कुचन विधि
स comp्कुचन विकल्प मा, यो सुविधा हो कि संकुचित गर्न को लागी फाइल को आकार निर्धारण गर्दछ र फाइल को गुणस्तर लाई प्रभावित गर्दछ। प्रक्रियाहरु छोटो गर्न को लागी कम्प्रेस गर्न को लागी कम गुणस्तरीय कम्प्रेसन को परिणाम हुनेछ। लामो समय सम्पीडन समय, राम्रो सम्पीडन हुनेछ। संपीडन विधि मा खुल्ने विन्डो मा;
यो विकल्प छ।
तपाइँ याद गर्नु पर्छ कि जब तपाइँ सब भन्दा छिटो ढाँचा मा संकुचित गर्नुहुन्छ, तपाइँ सबैभन्दा कम गुणस्तर संग फाइल कम्प्रेस गर्नुहुनेछ।
5 - भोल्युममा विभाजित गर्नुहोस्
यो फाइल को सression्कुचन प्रदान गर्दछ यो वांछित आकार को टुक्राहरु मा विभाजित गरेर संकुचित हुन को लागी। तपाइँ5जीबी फाइलहरु मा विभाजित गरेर एक 20GB फाइल कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। विकल्पमा भागको आकार टाइप गर्नुहोस्, र तपाईंको फाईल त्यो आकारको भागहरूमा विभाजन हुनेछ।
6 - मोड अपडेट गर्नुहोस्
यो संकुचित र संग्रहित फाइलहरु मा अपडेट गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यदि फाइल थप्न को लागी संग्रह मा फाइल जस्तै हो, यो एक विकल्प प्रदान गर्दछ।
7 - संग्रह विकल्प
संग्रह विकल्पहरु अन्य कम्प्रेशन कार्यक्रमहरु को तुलना मा Winrar को सबैभन्दा विशिष्ट र सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुविधाहरु मध्ये एक हो। यसले अभिलेखको समयमा वा अघि फाईल प्रयोगको लागि विकल्पहरू प्रदान गर्दछ। यी;
यसलाई परीक्षण गर्नुहोस्
ठोस संग्रह बनाउनुहोस्
SFX संग्रह सिर्जना गर्नुहोस्
संग्रह को आदेश पछि फाइलहरु मेटाउनुहोस् फाइल हार्ड डिस्क बाट हटाउन को लागी अनुमति दिन्छ।
परीक्षण सived्ग्रह फाइल कमान्ड संकुचित फाइल परीक्षण पछि मेटाउन को लागी अनुमति दिन्छ।
ठोस संग्रह आदेश बनाउनुहोस् एक कम्प्रेसन विधि RAR ढाँचा मा प्रयोग गरीन्छ। यस प्रकार, फाइलहरु एक स्वस्थ तरीका मा संकुचित गर्न सकिन्छ।
सिर्जना SFX अभिलेख कमाण्ड भनेको कम्प्युटरमा खोल्नको लागि फाइल सक्षम पार्ने सुविधाको सुविधा हो जुन विनर स्थापना गरिएको छैन। स्थानान्तरण गरिएको फाइल फाइल खोल्न को लागी अनुमति दिन्छ यदि Winrar अन्य पार्टी को कम्प्यूटर मा स्थापित छैन, यो आदेश को लागी धन्यवाद।
Winrar मा उन्नत ट्याब
• पासवर्ड सिर्जना • कम्प्रेशन सेटिंग • SFX सेटिंग्स • रिकभरी साइज • भोल्युम सेटिंग्स
यस खण्ड मा, तपाइँ एक पासवर्ड बनाउन, सम्पीडन सेटिंग्स बनाउन, रिकभरी आकार र भोल्युम सेटिंग्स बनाउन, र एक गुणस्तरीय फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ।
Winrar मा विकल्प ट्याब
विकल्प ट्याब मा, अपडेट मोड मा सिर्जना पछि फाइल मेट्नुहोस् बटन छ। यहाँ तपाइँ तपाइँको इच्छा अनुसार समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ।
Winrar मा फाइल ट्याब
फाइल ट्याबमा, तपाइँ फाइलहरु छुट्याउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ संगठित फाइल मा शामिल गर्न चाहनुहुन्न, र तपाइँको संकुचित फाइल पुन: व्यवस्थित गर्नुहोस्।
Winrar मा ब्याकअप ट्याब
यो खण्ड हो जहाँ ईन्क्रिप्टेड फाइल सुरक्षित छ र जहाँ यो जगेडा छ। कार्यक्रम स्वतः चयनित विभाजन संकुचित फाइल बचत हुनेछ।
Winrar मा समय ट्याब
यो सेक्शन हो जहाँ अभिलेख समय सेट गरिएको छ।
Winrar मा विवरण ट्याब
यो भाग हो जहाँ एनोटेशन सिर्जना फाइल मा थपिएको छ। तपाइँ फाइल सामग्री वा विवरण तपाइँ तपाइँको फाइल गर्न चाहानुहुन्छ को बारे मा विवरण थपेर फाइल कम्प्रेसन प्रक्रिया पूरा गर्न सक्नुहुन्छ।
नोट: यदि तपाइँ संकुचित हुन को लागी फाइल मा क्लिक गर्नुहोस् र दोस्रो कम्प्रेशन कमाण्ड को उपयोग गर्नुहोस्, Winrar चाँडै कम्प्रेस हुनेछ।
जब कम्प्रेस र ई-मेल आदेश चयन गरिएको छ, फाइल उही फोल्डर मा संकुचित र ई-मेल कार्यक्रम को संलग्नक खण्ड मा थपिएको छ।
कम्प्रेस, फाइल नाम र ईमेल पठाउनुहोस् आदेशको साथ, अस्थायी फाइल संकुचित गरियो र फाइल पूर्वनिर्धारित ई-मेल ठेगानामा थपियो।
कुन फाइल एक्सटेन्सन Winrar समर्थन गर्दछ?
यो फाइल एक्स्टेन्सन हो जसले संकेत गर्दछ कि कुन ढाँचा र ढाँचामा फाइल छ। कम्प्यूटर मा प्रयोग सबै फाइलहरु एक एक्सटेन्सन छ। यी एक्सटेन्सन को लागी धन्यवाद, तपाइँ फाइल के हो र यो फाइल लाई समर्थन गर्ने प्रोग्रामहरु अपरेटि। सिस्टम मा छन् भन्ने बारे एक विचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेट बाट डाउनलोड गरिएको कुनै पनि फाइल को विस्तार मा हेरेर, हामी सिक्न सक्छौं कि हामी एक्सेल वा ओपन अफिस संग फाइल खोल्न सक्छौं।
तपाइँ Winrar संग एक डाउनलोड वा ई-मेल संकुचित फाइल डिकम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। Winrar, जो एक फाइल सression्कुचन र संग्रह कार्यक्रम हो, ARJ, BZ2, CAB, GZ, ISO, JAR, LZH, TAR, UUE, 7Z र Z, RAR र ZIP बाहेक धेरै फाइल एक्सटेन्सन समर्थन गर्दछ। RAR र ZIP फाइलहरु सबै भन्दा धेरै प्रयोग संकुचित फाइलहरु हुन्। तपाइँ यी फाइलहरु लाई खोल्न को लागी नि: शुल्क Winrar सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ खोल्न र यी फाइलहरु लाई फाइल हेर्ने सुविधा संग उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जुन Winrar द्वारा प्रस्तावित धेरै विकल्पहरु मध्ये एक हो।
जिप भन्दा राम्रो सression्कुचन प्रदान, RAR संग्रह व्यवस्थापन मा धेरै शक्तिशाली छ। RAR विस्तार संग एक फाइल खोल्न को लागी, तपाइँ Winrar स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, जो सबैभन्दा मनपर्ने कम्प्रेसन कार्यक्रम हो।
Winrar मा सबै भन्दा राम्रो कम्प्रेसन विधि कुन हो?
Winrar, जो संकुचित र कम्प्युटर वातावरण मा संग्रह गर्न को लागी फाइलहरु लाई सक्षम बनाउँछ, भण्डारण ठाउँ र सुरक्षा समस्याहरु को लागी अत्यधिक प्रभावी समाधान प्रदान गर्दछ। यसबाहेक, फाइलहरु नियमित रूप बाट संग्रह गरीएको छ, प्रयोगकर्ता दक्षता बढाउँदै। कुनै फरक पर्दैन कसरी उन्नत टेक्नोलोजी छ, डाटा भण्डारण समस्या सधैं प्रयोगकर्ताहरु लाई परेशान गर्दछ। जे होस् हार्ड डिस्क र ठूलो मेमोरी संग USBs विकसित गरीएको छ, यो कम्प्यूटर वातावरण मा हात मा फाइलहरु राख्न को लागी वांछित छ। Winrar, जो यो बिन्दु मा सबै भन्दा राम्रो सression्कुचन कार्यक्रम को रूप मा प्रयोग गरीन्छ, आफ्नो प्राविधिक सुविधाहरु र प्रकार्य संग अन्तरिक्ष बचत गरेर जीवन बचाउँछ।
Winrar फाइल सression्कुचन विधिहरु
विनर, जुन फाईल कम्प्रेसनमा यसको प्रतियोगीहरू र यसको कार्यक्षमतासँग सiving्ग्रह गर्नेमा तुलनात्मक रूपमा सबैभन्दा बढी मनपर्ने सफ्टवेयर हो, संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय फाइल कम्प्रेसन प्रोग्राम हो। आजको संसार मा, जहाँ खेलहरु १० बर्ष पहिले को तुलना मा अत्यधिक विकसित गरीएको छ, जबकि १ जीबी आन्तरिक मेमोरी को लागी पर्याप्त बर्ष पहिले थियो, आज यो क्षमता ३०-५० जीबी को बीचमा छ। जो Winrar सम्पीडन कार्यक्रम को उपयोग गर्दैनन्, अर्कोतर्फ, फाइलहरु संग्रह गर्नुहोस् कि उनीहरु कम से कम उपयोग गर्दछन् वा कि उनीहरुलाई मेट्न वा फ्लैश मेमोरी गर्न को लागी। जबकि Winrar एक उन्नत सम्पीडन कार्यक्रम हो कि तपाइँ भागहरु मा विभाजित गरेर ठूलो फाइलहरु लाई संग्रह गर्न सक्नुहुन्छ। भागहरु मा विभाजित फाइलहरु निर्बाध हटाउन सकिने ड्राइभहरु लाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ।
भागहरु मा फाइलहरु विभाजन
फाइल मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् तपाइँ Winrar मा संकुचित गर्न चाहानुहुन्छ, र संग्रहमा थप्नुहोस् स्क्रिनमा, त्यहाँ भोल्युम, आकार खण्डमा विभाजन छ। यहाँ, कति एमबी फाइल विभाजित गरिनेछ को संख्या प्रविष्ट गरीन्छ र ठीक बटन थिचिएको छ। यस प्रकार, Winrar भागहरु मा विभाजित गरेर एक गुणस्तरीय तरीका मा ठूलो फाइल अभिलेख। संग्रह मा थप्नुहोस् विकल्प मा, सर्वश्रेष्ठ सression्कुचन विकल्प चयन गरिएको छ, र फाइल सामान्य भन्दा थोरै लामो समय मा संकुचित छ, तर सबै भन्दा राम्रो तरीका मा।
उन्नत ट्याबमा फाईलको लागि पासवर्ड सेट गरेर फाइलको नाम ईन्क्रिप्ट गरिएको छ। यदि फाईल नाम ईन्क्रिप्ट गरिएको छैन भने, विनरले फाईल खोल्दा पासवर्डको लागि सोध्दैन। जे होस्, यो अनुरोध हेर्न को लागी डाटा प्रतिलिपि गर्न को लागी एक पासवर्ड को लागी सोध्दछ। यदि तपाइँ तपाइँको फाइल prying आँखा बाट सुरक्षित र निजी राख्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ सुरक्षा को लागी फाइल एन्क्रिप्शन को लागी जानु पर्छ।
Winrar सर्वश्रेष्ठ कम्प्रेसन विधि
सर्वश्रेष्ठ विकल्प फाइल को उच्च प्रदर्शन सम्पीडन को लागी चयन गर्नुपर्छ। यो विकल्प संग, जो सामान्य भन्दा लामो कम्प्रेसन समय छ, फाइल सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन संग संकुचित छ। यस प्रकार, Winrar उच्चतम गुणस्तर मा सम्पीडन प्रक्रिया बनाउँछ।
सर्वश्रेष्ठ विकल्प मा क्लिक गरेर सression्कुचन विधि को चयन पछि, दायाँ मा रातो क्षेत्र मा ठोस संग्रह सिर्जना गर्नुहोस् बक्स जाँच गर्नुपर्छ। विभाजन विभाजन र पासवर्ड निर्धारण पछि, ठोस संग्रह सिर्जना गर्नुहोस् विकल्प पनि जाँच गरीएको छ र स OK्कुचन प्रक्रिया ठीक बटन थिचेर सुरु हुन्छ। ठोस संग्रह एक स्वामित्व सम्पीडन विधि हो र मात्र RAR संग्रह द्वारा समर्थित छ। जिप अभिलेख ठोस छैनन्। एक ठोस संग्रह समान र ठूला फाइलहरु compressing मा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।
यसको विपरित, हार्ड संग्रह अपडेट ढिलो छ, र ठोस संग्रहबाट फाइल निकाल्न सम्पूर्ण संग्रह डिकोड गर्नुपर्दछ। एकै समयमा, यो एक ठोस संग्रह मा एक क्षतिग्रस्त फाइल निकाल्न सम्भव छैन।
यदि तपाइँ संग्रह मा फाइलहरु लाई बारम्बार अपडेट गर्न र संग्रह बाट कुनै पनी फाइलहरु लाई बारम्बार हटाउने छैन, तपाइँ ठोस संग्रह विकल्प चयन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा, ठोस स option्ग्रह सिर्जना विकल्प जाँच बिना एक सम्पीडन सबै भन्दा राम्रो सression्कुचन विधि हुनेछ।
यो ध्यान दिनुपर्छ कि Winrar JPEG, PNG, AVI, MP4, MP3 फाइलहरु को लागी 5-10 MB भन्दा बढी कम्प्रेस गर्न सक्दैन। किनभने यी फाइलहरु पहिले नै संकुचित फाइलहरु हुन्।
सबै भन्दा राम्रो कम्प्रेसन अनुपात पाठ आधारित फाइलहरु को लागी हो। उदाहरण को लागी, एक शब्द कागजात 80%द्वारा संकुचित गर्न सकिन्छ।
विनरले कुन कम्प्रेसन टेक्नोलोजी प्रयोग गर्छ?
विनरले सफ्टवेयर बीच फाईल कम्प्रेसन र आर्काइभमा पहिले स्थान ओगटे, फाइलहरू डिकम्प्रेस गर्दै। संसारभरि 500 ​​मिलियन भन्दा बढी मानिसहरु Winrar को उपयोग गरीरहेका छन्। कार्यक्रम, जो WinZip को सिंहासन लिनुभयो, यसको टर्की भाषा विकल्प संग प्रयोगकर्ताहरु बाट पूर्ण अंक प्राप्त गर्दछ। चलो सम्पीडन टेक्नोलोजीहरु कि Winrar यति सही बनाउन र आफ्नो फाइदाहरु को सूची बनाउन को लागी जाँच गर्नुहोस्।
Winrar फाइल सression्कुचन
Winrar फाइल सression्कुचन विधिहरु को बीच, त्यहाँ भण्डारण, छिटो, छिटो, सामान्य, राम्रो र सबै भन्दा राम्रो विकल्प छन्। यी विकल्पहरु, जो संकुचित गर्न को लागी फाइल मा दायाँ क्लिक गरे पछि देखा पर्छन् र भनिएको संग्रह मा थप्नुहोस्, प्रदर्शन र संकुचित फाइल को गुणस्तर निर्धारण पछि प्रशोधन। RAR र ZIP Winrar मा सबैभन्दा मनपर्ने कम्प्रेसन विधि हो।
यदि RAR संग संकुचित फाइल साझा वा अर्को प्रयोगकर्ता संग हस्तान्तरण गर्न को लागी हो, Winrar सफ्टवेयर कम्प्यूटर मा फाइल पठाइएको छ स्थापित हुनुपर्छ। अन्यथा, त्यहाँ फाइल खोल्न एक समस्या हुनेछ। जिप संकुचित फाइलहरु फाइलहरु छन् कि एक WinZip को उपयोग गरेर एक उपयोगकर्ता द्वारा खोल्न सकिन्छ। यदि यो WinZip मा स्थापित छैन, यो Winrar बिना यो फाइल खोल्न सम्भव देखिदैन।
सression्कुचन विधि प्रयोगकर्ता जो फाइल कम्प्रेस गर्न चाहन्छ द्वारा निर्धारित गरीन्छ। विकल्पहरु मध्ये, सर्वश्रेष्ठ विकल्प विधि हो कि अधिकतम स्तर मा फाइल कम्प्रेस र कम ठाउँ लिन्छ। मात्र नकारात्मक पक्ष यो हो कि प्रक्रिया अन्य विकल्पहरु भन्दा अलि लामो समय लाग्छ। फाइल को आकार १०० एमबी भन्दा कम छ र कम्प्युटर को प्रदर्शन राम्रो छ भने सर्वश्रेष्ठ सression्कुचन विधि पनि चयन गर्न सकिन्छ। यदि कम्प्यूटर ढिलो छ र संकुचित गर्न को लागी फाइल आकार ठूलो छ, यो सबैभन्दा छिटो विकल्प चयन गर्न को लागी अधिक तार्किक हुनेछ।
Winrar फाइल ईन्क्रिप्शन
एक फाइल कम्प्रेसन टेक्नोलोजी को रूप मा Winrar को सबैभन्दा विशिष्ट सुविधाहरु मध्ये एक फाइल ईन्क्रिप्शन हो। यद्यपि यो एक सression्कुचन सफ्टवेयर हो, यो पनि एक फाइल एन्क्रिप्शन सफ्टवेयर को रूप मा उत्कृष्ट छ। सुरक्षा को लागी फाइल ईन्क्रिप्शन को महत्व आज धेरै राम्रो महसुस गरीएको छ। एन्क्रिप्शन प्रक्रिया, जो महत्वपूर्ण कागजातहरु को लागी पहुँच रोक्छ, संकुचित फाइल खोल्न को लागी अनुमति दिन्छ र केवल प्रयोगकर्ता द्वारा हेर्न को लागी यो सम्बन्धित छ। फाइल मा पहुँच संग पनि, यो लगभग एक 128-बिट सुरक्षा पासवर्ड दरार गर्न असम्भव देखिन्छ।
बहु कोर प्रोसेसर समर्थन
Winrar को नवीनतम संस्करण बहु कोर प्रोसेसर को समर्थन गर्दछ। यदि तपाइँको कम्प्यूटर एक बहु कोर प्रोसेसर छ, तपाइँ निश्चित रूप बाट यसको फाइदा लिनु पर्छ। Winrar को नवीनतम संस्करण सक्रिय रूप मा बहु-कोर प्रोसेसर प्रकार्य को उपयोग गर्दछ। त्यसैले तपाईं लेनदेन छिटो गर्न सक्नुहुन्छ। परीक्षण गर्न; सफ्टवेयर चलाउनुहोस्, विकल्पहरूबाट सेटि menu मेनू प्रविष्ट गर्नुहोस्, सामान्य ट्याबमा मल्टिथ्रेडि विकल्प सक्रिय गर्नुहोस्।
Winrar संग पीसी परीक्षण
के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ winrar संग पीसी परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ? तपाइँ पीसी परीक्षण संग तपाइँको कम्प्यूटर को प्रदर्शन मापन गर्न सक्नुहुन्छ, जो Winrar को सबै भन्दा राम्रो सेवाहरु मध्ये एक हो। तपाइँ पनी स्कोर Winrar तपाइँको अपरेटि system सिस्टम लाई दिन्छ जान्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको कम्प्यूटर को प्रदर्शन सिकाएर के तपाइँ निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
Winrar संग पीसी परीक्षण गर्न; Winrar सफ्टवेयर चलाउनुहोस्, उपकरण मेनुमा जानुहोस्, गति र हार्डवेयर परीक्षण विकल्प जाँच गर्नुहोस्, तुरुन्तै परिणाम प्राप्त गर्नुहोस्।
भ्रष्ट फाइलहरु पुन: प्राप्ति
एक प्रयोगकर्ता को लागी सबैभन्दा निराशाजनक चीजहरु मध्ये एक फाइल भ्रष्टाचार हो। बिग्रेको फाइल खोल्न सकिदैन। विशेष गरी यदि यो एक महत्वपूर्ण फाइल हो, यो समस्या को एक धेरै सिर्जना गर्दछ। Winrar यस मामला मा खेल मा आउँछ। यदि तपाइँ संग्रहित र भ्रष्ट फाइलहरु खोल्न सक्नुहुन्न, तपाइँ Winrar बाट मद्दत प्राप्त गर्नु पर्छ। यसका लागि; Winrar चलाउनुहोस्, सफ्टवेयर मा तपाइँ मर्मत गर्न चाहानुहुन्छ फाइल छान्नुहोस्, माथिल्लो दायाँ मा मर्मत बटन थिच्नुहोस्
64 बिट प्रदर्शन
यदि तपाइँको कम्प्युटर-64-बिट छ भने, हामी तपाइँलाई विनरको-64-बिट विकल्प प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं। यदि तपाइँ कसरी एक लाभ प्राप्त गर्न को लागी कुनै जानकारी छैन, चलो यसलाई तुरुन्तै व्याख्या गर्नुहोस्। Winrar 64 बिट प्रयोगकर्ता मेशिन प्रदर्शन र उपयोग को मामला मा एक महान लाभ दिन्छ। विन्डोजमा प्रणाली प्रकार सेक्सन जाँच गर्नुहोस् जुन एकै समयमा विन्डोज + पज कुञ्जीहरू थिचेर खोल्दछ। यदि त्यहाँ एक 64-बिट अपरेटि system्ग सिस्टम विवरण यहाँ छ, हामी Winrar को 64-बिट संस्करण को उपयोग गर्न को लागी सिफारिश गर्दछौं।
फाईल आकार: 3.07 MB
पछिल्लो अद्यावधिक: 29-07-2021
डाउनलोड गर्नुहोस्: 9,563
--जिप एक नि: शुल्क र शक्तिशाली सफ्टवेयर हो जससँग कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूले फाईलहरू र फोल्डरहरूलाई...
ब्यान्डिजिप एक धेरै छिटो, प्रकाश र नि: शुल्क संग्रह कार्यक्रमको रूपमा खडा छ जुन तपाईं लोकप्रिय फाइल...
PeaZip आर्चीभर कम्प्यूटर प्रयोगकर्ताहरूको लागि एक वैकल्पिक र नि: शुल्क कम्प्रेसन प्रोग्राम हो। खुला...
InnoExtractor एक सानो तर प्रभावी कार्यक्रम हो जसको साथ तपाईंले Inno स्थापना फाइलहरूमा समावेश भएको...
जिपवेयर एक शक्तिशाली फाइल कम्प्रेसन प्रोग्राम हो जुन तपाईं आफ्नो डेस्कटप कम्प्युटरहरूमा प्रयोग गर्न...
Ashampoo Zip नि: शुल्क एक संग्रह कार्यक्रम हो जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई अभिलेखहरू सिर्जना गर्न र खोल्न...
तपाई सजिलै जिप संग्रह फाईलहरू तपाईको कम्प्युटरमा सेकेन्डमा जिप ओपनर अनुप्रयोगको साथ हेर्न...
PowerArchiver एक शक्तिशाली अभिलेख कार्यक्रम हो कि आज सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरिएको कम्प्रेस फाइल...
Bitser एक सजीलो प्रयोग गर्न को लागी, कम्प्याक्ट संग्रह उपकरण हो कि तपाइँ संग्रह र ब्याकअप तपाइँको...
यो कार्यक्रम बन्द गरिएको छ। तपाइँ विकल्प हेर्न को लागी फाइल कम्प्रेसर श्रेणी ब्राउज गर्न...
UltimateZip एक सरल को लागी उपयोग फाइल कम्प्रेशन र डिकम्प्रेसर प्रोग्राम हो कि ZIP, JAR, CAB, 7Z र...
फाइल एक्स्ट्रक्टर, एक फरक WinRaR विकल्प, एक संकुचित फाइल डिकम्प्रेशन प्रोग्राम हो कि तपाइँ सजीलै र...
तपाइँ सजिलै संग विन्डोज 8.1 अपरेटि। सिस्टम को लागी विकसित 7Zip ओपनर आवेदन संग संग्रह फाइलहरु खोल्न...
MSI Unpacker, जस्तै नाम सुझाव दिन्छ, एक पोर्टेबल प्रोग्राम हो कि तपाइँ MSI स्थापना फाइलहरुमा...
बिरालो कम्प्रेस एक संग्रह प्रबन्धक हो कि प्रयोगकर्ताहरु लाई बनाउन र संग्रह अभिलेख मा मद्दत गर्दछ।...
उन्नत Installer एक विन्डोज Installer संलेखन उपकरण हो। कार्यक्रम एक उपयोगी इन्टरफेस र प्रयोग गर्न...
Ashampoo ZIP प्रो कार्यक्रम Ashampoo कम्पनी, जो धेरै क्षेत्रहरु मा बिभिन्न कार्यक्रमहरु को उत्पादन,...
आईएसओ कम्प्रेसर एक उपयोगी आईएसओ फाइल सम्पीडन विन्डोज प्रयोगकर्ताहरु को लागी आफ्नो आकार घटाउन र...
तपाइँ छिटो र सजीलै तपाइँको कम्प्यूटर बाट लोकप्रिय संग्रह फाइलहरु RAR ओपनर आवेदन को उपयोग गरी हेर्न...
डीएमजी एक्स्ट्रक्टर एक नि: शुल्क र उपयोगी सफ्टवेयर छ जसलाई आईएसओ वा आईएमजी ढाँचामा रूपान्तरण नगरीकन...
7-जिप SFX निर्माता एक खुला स्रोत SFX फाइल निर्माण कार्यक्रम हो कि प्रयोगकर्ताहरु को लागी नि: शुल्क...
7z एक्स्ट्रक्टर मूलतः एउटा संग्रह फाइल खोल्न कार्यक्रम हो कि प्रयोगकर्ताहरु लाई 7z खोल्न को लागी...
ZIP रीडर एक उपयोगी र नि: शुल्क कार्यक्रम प्रयोगकर्ताहरु जिप विस्तार संग संग्रह फाइलहरु खोल्न को...
नोट: यो कार्यक्रम को कारण दुर्भावनापूर्ण सफ्टवेयर को पता लगाउन को लागी हटाइएको छ। यदि तपाइँ...
MagicRAR एक संग्रह प्रबन्धक हो कि प्रयोगकर्ताहरु लाई जिप र RAR संग्रह फाइलहरु खोल्न, नयाँ संग्रह...
Zipeg एक सफल उपकरण हो कि तपाइँ हेर्न र संकुचित फाइलहरु जस्तै ZIP, RAR र 7Z को रूप मा सामग्रीहरु...
द्रुत जिप एक शक्तिशाली र छिटो फाइल सression्कुचन कार्यक्रम हो कि लोकप्रिय संग्रह स्वरूपहरु लाई...
यो एक उन्नत फाइल सression्कुचन कार्यक्रम हो कि तपाइँको फाइलहरु र फोल्डरहरु को लागी धेरै संपीड़न...
WinArchiver एक संग्रह हेर्ने र सिर्जना कार्यक्रम हो कि बजार मा लगभग सबै संग्रह ढाँचाहरु लाई समर्थन...